Mogadishu Journal » Aas Qaran oo Muqdisho loogu sameeyay marxuum xildhibaan Cumar Isloow”Sawirro”
Mjournal : — Waxaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho laga soo dajiyay meydka alle ha u naxatiisteen marxuum Cumar Isloow Max’ed oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya kuwooda ugu fir fircoon oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Salaada Jinaasada ayaa lagula tukaday marxuum-ka gudaha garoonka diyaaradaha, waaxana ka qeyb-gallay mas’uuliyiinta dowladda oo uu horkacayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Pro Max’ed Cismaan Jawaari oo ka hadlay salaadii janaasada kadib goobta ayaa shacbiga Soomaaliyeed ka codsaday iney marxuumka iska cafiyaan waxaana uu Alle uga baryey inuu naxariistiisa jano siiyo.
Sidoo kale, guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay geerida Xildhibaan Cumar Isloow Maxamed waxaana uu sheegay in Xildhibaanku uu ahaa nin mug ku dhex leh Golaha Shacabka.
Xildhibaannada baarlamaanka qaarkood oo iyaguna ka qeyb-gallay aaska marxuum-ka ayaa sheegay in ay siweyn uga naxeen markii ay maqleen geerida Cumar Isloow oo ay ku tilmaameen in uu ahaa shaqsi ku weynaa baarlamaanka Soomaaliya.
Marxuum-ka Alle ha uu naxariistee Marxuum Cumar Isloow Maxamed waxa uu dhashay sanadkii 1952kii waxaana uu ku dhashay tuulada Ugunji oo ku dhow deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose,waxbarashadiisa Dugsiga Dhexe waxa uu ku dhameystay Dugsiga Dhexe Dhagaxtuur ee degmada Afgooye,halka dugsiga sarena uu kaga baxay iskuulka Sheekh Xasan Barsame isagoo markaasi kadibna ku biiray Hay’adda Nabad Sugidda Qaranka Soomaaliyeed oo uu ka gaaray, darajada Col isagoo sanadihii 1981kii-1982kii soo noqday taliyihii nabad sugidda gobolka Bari,kadib hay’adda Nabad Sugidda waxa uu ka baxay kuliyadda Culuumta Siyaasadda ee Jaamacadii umadda intii u dhaxeysay 1982kii-1985kii,dhanka siyaasadana waxa uu ahaa Mudane Baarlamaan lagasoo bilaabo baarlamaanka Dowladdii TNG-da ee Carta.